Okokufundisa: I-Loop File Systems | Kusuka kuLinux
U-Ivan | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
1 Luyini uhlelo lwefayela le-loop?
2 Ukusetshenziswa kwamafayela we-loop
2.1 Amafayela we-1- Mount.iso
3 2- ama-squashfs afundwayo kuphela
4 3- «Ukushintshana okuphuthumayo»
5 4-yenza okufunayo
6 Izixhumanisi zentshisekelo
Luyini uhlelo lwefayela le-loop?
I-Gnu / Linux (kanye neningi lezinhlelo ze-unix) inendlela evumela ukufaka ifayili (elifomethwe ngaphambilini) njengokungathi yidiski eliqinile, imvamisa ngaphandle kwetafula lokuhlukanisa. Lo mdwebo we-crappy (owenziwe yimi) uchaza ukuthi le ndlela isebenza kanjani.
** Ayimeleli ngokuphelele ukusebenza kwangempela.
Ukusetshenziswa kwamafayela we-loop
Amafayela we-1- Mount.iso
Amafayela we-.iso, ubuhle obusezingeni elijwayelekile kuma-CD nakuma-DVD, awalutho ngaphandle kwefayela elingu-loop uhlelo lwalo olungaba ISO 9960 (okuvame kakhulu kumaCD) noma UDF (okuvame kakhulu kuma-DVD). Ukuyifaka, sizosebenzisa umyalo we-mount.
mkdir iso # sakha umkhombandlela chmod -R 666 iso # sinikeza bonke abasebenzisi funda imvume ukukhweza isithombe.iso iso / # sifaka isithombe se-iso (sidinga impande)
Umkhawulo onawo ukuthi, ngenxa yezizathu ezisobala, womabili la mafayili amafayili afundwa kuphela.
2- ama-squashfs afundwayo kuphela
Ake sithi sinefolda yezithombe kanye / noma amavidiyo ahlelwe ngokuya ngonyaka athathwe ngawo. Ngokusobala, akunakwenzeka neze ukuthi sifuna ukuguqula idatha equkethwe kumafolda weminyaka edlule. Yilapho ama-Squashfs engena khona. I-squashfs uhlelo lwefayela olucindezelwe kuphela, ngakho-ke lapho isithombe senziwe, ngeke sikwazi ukuguqula idatha ngaphakathi.
Ngakho-ke, hhayi kuphela sizokonga inani elikhulu lesikhala, kodwa futhi kuzoba nomphumela wokufuna ukwazi ukuthi ukufundwa kwamafayela kuzoshesha, ngokufunda amafayela amancane, ngoba kulezi zinsuku ukucindezela ifayili kungumzamo omncane wama-CPU amaningi.
Ukushiya ama-preambles, ukudala isithombe se-squashfs kufanele sisebenzise umyalo we-mksquashfs, ogama lakhe lilula:
Nasi isibonelo esisebenzayo:
Yebo, i-algorithm ekhethiwe yi-xz ngoba yiyo leyo isilinganiso sokucindezela esiphakeme okunikezwayo (kwalokhu okutholakalayo), ngenkathi usayizi webhlokhi okhethiwe ubuningi. ini ivumela imiphumela engcono yokucindezela (ngokuzenzakalela zingama-64KiB).
Manje kufanele sikwazi ukuyifaka ngokulula;
Ngemuva kokubheka ukuthi konke kulungile, singasusa amafayela woqobo noma sishiye ifayela njengesipele.
Uma kwenzeka sifuna ukuthi ifakwe lapho i-OS iqala, kufanele sengeze umugqa walesi sitayela ku / etc / fstab:
Ukufaka idatha engalungile kufayela le- / etc / fstab kuzobangela ukuthi uhlelo luyeke ukubhutha. Ukuqinisekisa ukuthi yonke into isebenza kahle, singasebenzisa umyalo ukukhweza -a
Manje, kwenzekani lapho sifuna ukufaka noma ukususa amafayela, noma ukumane sikhiphe lezi zithombe? Yebo, sinomyalo umyalo unsquashfs.
Ngokuzenzakalelayo izosebenzisa i- "squashfs-root" njengomkhombandlela wesizinda. kungashintshwa nge -d inketho
Ngaphandle kwalesi sibonelo, ama-squashfs asetshenziswa futhi ku:
Ngokuvamile, noma yiluphi uhlelo lokufunda kuphela
3- «Ukushintshana okuphuthumayo»
Cabanga ukuthi nganoma yisiphi isizathu (ubuthongo basebusika, ukuhlanganiswa okukhulu ...) udinga ukushintshaniswa okwengeziwe. Yilapho kufakwa khona ifayela le-loop, isinyathelo sokuqala ukwenza ifayela elingenalutho losayizi othile, ngosayizi othile webhulokhi, lokhu sikwenza ngomyalo dd:
dd ezandleni ezingafanele mubi kunenkawu ephethe isibhamu. Cabanga ngaphambi kokucindezela ukungena
Kulokhu, ibhlokhi iyi-MiB eyodwa futhi usayizi wefayela ngu-512MiB. Akudingeki kube ngale ndlela.
Sakha futhi sisebenzise ukushintshaniswa ngalo myalo
Gcina ukhumbula ukuthi ukusebenza kwefayela le-loop kuhlala kuphansi ngandlela thile kunokwenyama yangempela.
Lezi ngezinye nje zezibonelo ezivelele, zizwe ukhululekile ukuzama ama-chroots, amasistimu wokubethela, izihibe ezihlanganisiwe… Amathuba akho awanamkhawulo. Kepha, qaphela imiyalo oyisebenzisayo, cabanga ngokucophelela ngaphambi kokucindezela ukungena.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Okokufundisa: I-Loop File Systems
Okuthunyelwe okuhle che !! Nginezipele ezinkulu laphaya futhi akukaze kwenzeke kimi ukuzicindezela. Ngizosebenzisa lokhu nangendlela engibethela ngayo eyangaphandle ukuyigcwalisa bese ngikhumbula ukuthi bengizoyibethela 🙁
Kuyathakazelisa ukuzama into ye-squashfs
Isifundo esihle, bengifunde ukuthi ngingawenza kanjani amafayela we-img nge-dd bese ngiwafaka, kepha bengingazi ukusetshenziswa kwamaSquashf nokucindezelwa kwawo; Yize ingavumeli ukuguqula okuqukethwe kwayo, ukusetshenziswa kwayo kungasiza ezimweni ezinjengalezo oziphawulayo. Siyabonga ngokwabelana, imikhonzo.
Kuhle kakhulu ukwazi, ngiyabonga ngethiphu.
Uhlala ufunda okusha njalo. Kuhle kakhulu!
Kuyahlekisa, ngangazi ama-squashfs nokuthi enzelwe ini, kepha bekungakaze kwenzeke kimi ukucindezela izithombe zami. Siyabonga ngethiphu.
Kuyathakazelisa, ukukuzama ukubona ukuthi yini ephezulu. Ithiphu enhle kakhulu
tuto omuhle kakhulu !!! =)… Ithiphu enhle kakhulu !!!
Sawubona roader. I-athikili ethakazelisa kakhulu, ngiyabonga ngokwabelana.
Ku-Gentoo udinga ukunika amandla ukwesekwa kwe-SquashFS ku-kernel ngaphambi kokuyihlanganisa, ngizoyihlola ukuze ngibone ukuthi isebenza kanjani. Ngiyabonga.
ihlolwe ku-Gentoo uyihlanganisela i-kernel futhi ihle kakhulu.
Vele ulungise i-typo encane, i-roader.
izithombe ze-mksquashfs-2009 photos-2010 photos-2011 photos-2012 photos-2013 photos_2009-2013.sqsfs -comp xz -bs 1M
gcina i-s ku "-bs" (enquma usayizi webhulokhi), kufanele ibukeke kanjena:
izithombe ze-mksquashfs-2009 photos-2010 photos-2011 photos-2012 photos-2013 photos_2009-2013.sqsfs -comp xz -b 1M
Ukusekelwa kwe-MTP [Android] kunoma ikuphi ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux.